Wacdaro kala qabsadey gabar wariye Holand u dhalatey & Muqayaliin Somali ah(VIDEO) – SBC
Wacdaro kala qabsadey gabar wariye Holand u dhalatey & Muqayaliin Somali ah(VIDEO)
Posted by editor on April 15, 2013 Comments
Wacdaro culus oo sababay in gacanta la isula tago ayaa dhexmarey gabar wariye ah oo u dhalatey wadanka Holand iyo koox muqayaliin Soomaali ah, xili gabadhan oo lagu magacaabo Nadia oo ka socotey Tv-ga POW NED ee dalka Holand laga leeyahay ay warbixin ka diyaarinaysay arimaha khaadka la soo galiyo wadanka Holand & isticmaalka dadka Soomaalida.
Warbixinta Tv-gu diyaariyey waxay daba joogtey iyadoo dalka Holand dhawaan laga mamnuucay isticmaalka Qaadka, soo galista iyo waliba ka ganacsigiisa ayaa waxaa jira warar isa soo tareyey mudooyinkii ugu dambeeyey kuwaasi oo la xiriira in Qaadku uu ku soo galo dalkaasi si dhuumaleysi ah iyadoo laga keeno wadanka Ingiriiska oo ilaa iyo haatan ah wadanka kaliya ee Qaarada Yurub ka tirsan ee Qaadku uu ka yahay sharci.
Hadaba arintaasi isagoo raad guraya Tv-ga POW Ned ayuu wuxuu isku dayey in uu warbixin ka diyaariyo Soomaalida ku nool magaalada Utrecht oo lagu eedeeyey in qayb ka mid ah ay Qaadka ka ganacsadaan ayna cunaan, iyadoo goobaha lagu iibiyo qaadka sida dhuumaaleysiga ah ay cabasho ka muujiyeen dadka degan ee dalkaasi u dhashay, kuwaasi oo ku eedeeyey qaad cunayaasha Soomaalida inay qaylo iyo saxmad ku hayaan xiliga ay qaadka iibsanayaan.
Gabadha wariyaha oo barnaamijka ay diyaarinaysay uu u muuqdey mid ujeedo fog xambaarsan waxay isku dayday inay wareysi qasab ah oo san ka galis ah ay ka qaado Soomaalid dhoobneyd goob ka mid ah magaalada Utrecht, kuwaasi oo ay ku tuhmaysay inay goobtaasi u joogeen ganacsi ama qaad cunis.
Dhawr nin oo Soomaali ah ayay gabadhu afka ka galisay Microphone-ka, iyadoo doonaysay inay ka hadalsiiso waxay su’aalaysay “Qaadka ma cuntey, “Ma qaad baad iibinaysay”,” Halkan maxaad ka qabanaysaa” iyo su’aalo kale oo qaarkood u muuqdey xadgudub oo aanay jecleysan Ragii Soomaalida ahaa ee ay Microphone-ka caasha ka galisay.
Qaar ka mid ah Soomaalidii ay wareysiga ku baacsanaysay gabdhan ayaa durbadiiba meesha isaga cararay, kuwa baabuur ayay ku baxsadeen oo ay waxay ka gabanayeen inaanay Caamiradu qaban, laakiin labo nin oo dhalinyaro oo gabadha wariyaha u maaro waayey iskuna dayey inay ka fogaadeen hase yeeshee ay ka hari wayday oo ay su’aalo la daba gashay ayaa markii dambe waxay dantu ku qasabtey inay haweenayda wariyaha indhaha candhuuf kaga sayriyeen, iyagoo ka tuuray microphone-kii ay sanka ka galinaysan.
Laakiin xaaladu waxay sii qaraaratey markii wiil dhalinyaro ah oo aad uga carooday dhaqanka gabadha wariyaha ah uu gacanta ula tagey haweenaydaasi oo uu kala tuuray, isagoo qadaadka qabtey, waxaase gabadhii wariyaha aheyd u soo hiiliyey oo u gurmaday kooxdii filim qaadayaasha ee la socdey halkaasi oo uu ka dhashay gacan ka hadal mudo socdey.
Arimahan waxay ku soo beegmayaan xili Soomaalida ku dhaqan wadanka Holand ay aad u dareemayaan faquuq aad u badan oo ay kala kulmayaan mujtamaca dalkaasi, iyadoo lagu eedeeyey warbaahinta iyo xisbiyada cunsiriyada xididada ka gashay inay aad u daba dhigteen soo faagida iyo ka hadalka xumaanta Soomaalidu leedahay.
Sanadkii hore ayaa aheyd markii gabar asalkeedu yahay Soomaali oo wariye ka ah Tv laga leeyahay wadankaasi ay barnaamij bahdil ah ka sameysya Soomaalida iyadoo loogu magac darey barnaamijkaasi Soomaalida dalka Holand ku dhaqan “Burcad Badeed & reer Miyi”.
Link-ga video hoose ka daawo wacdrahan yaabka iyo qosolka badan ee dhexmarey wariyaha & muqayiliinta Soomaalida.